Pyae Phyo (MMiTD): ♪ စမတ်ဖုန်းကင်မရာလောကကို ပြောင်းလဲပစ်မယ့် ကျောကင်မရာနှစ်လုံးပါ၊ Huawei P9 စမတ်ဖုန်း ထွက်ရှိ ♫
♪ စမတ်ဖုန်းကင်မရာလောကကို ပြောင်းလဲပစ်မယ့် ကျောကင်မရာနှစ်လုံးပါ၊ Huawei P9 စမတ်ဖုန်း ထွက်ရှိ ♫
ကျောကင်မရာနှစ်လုံးပါဝင်မယ်လို့ သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတဲ့ Huawei P9 စမတ်ဖုန်းဟာ မနေ့က လန်ဒန်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ကုန်ပစ္စည်းမိတ်ဆက်ပွဲမှာ တကယ်တမ်း ကျောကင်မရာနှစ်လုံးနဲ့ ထွက်ရှိလာပါပြီ။
ကမ္ဘာ့တတိယအကြီးဆုံးဖုန်းထုတ်လုပ်သူကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ Huawei ဟာ Apple နဲ့ Samsung တို့ကို အဓိကယှဉ်ပြိုင်သွားဖို့အတွက် P9 စမတ်ဖုန်းမှာ နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာတွေချည်း အသုံးပြုထားပြီး၊ နာမည်ကျော်ဂျာမန်ကင်မရာကုမ္ပဏီ Leica နဲ့ ပူးပေါင်းထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ကျောကင်မရာနှစ်လုံး ပါဝင်လာပါတယ်။
ဒီဇိုင်းပိုင်းမှာတော့ အရင်နှစ်ကထွက်ထားတဲ့ P8 ဒီဇိုင်းကို သိပ်မခွဲထွက်ထားဘဲ၊ Nexus 6P ဖုန်းနဲ့ နည်းနည်း ဆင်ပါတယ်။ Huawei ရဲ့ ပြောကြားချက်အရ P9 ဖုန်းဟာ Galaxy S7 နဲ့ iPhone 6s ဖုန်းထက် ပိုပါးပြီး၊ အလေးချိန် ၁၄၄ ဂရမ်ပဲ ရှိပါတယ်။ ဖုန်းကိုယ်ထည်တစ်ခုလုံးကို အလူမီနီယမ်နဲ့ လုပ်ထားပြီး၊ ကျောဘက်မှာ လက်ဗွေရာဆန်ဆာပါဝင်ပါတယ်။
မျက်နှာပြင်အကြီးကြိုက်သူတွေအတွက် Huawei P9 ရဲ့ ၅.၂ လက်မအရွယ် IPS display က အနေတော်လောက်ပါပဲ။ resolution မှာတော့ “ဖုန်းတစ်လုံးမှာ resolution 1080p ထက် ပိုသုံးတာက ဖုန်းဘက်ထရီသက်တမ်းအတွက် မကောင်းဘူး” ဆိုတဲ့ Huawei ရဲ့ ခံယူချက်အတိုင်း 1920×1080 pixel ကိုပဲ အသုံးပြုထားပါတယ်။ P9 Plus ဖုန်းမှာတာ့ မျက်နှာပြင်က ၅.၅ လက်မဖြစ်သွားပြီး၊ LCD အစား AMOLED display ကို သုံးထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
စွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်းမှာတော့၊ Huawei P9 ဖုန်းမှာ ကုမ္ပဏီထုတ် နောက်ဆုံးပေါ် Kirin 955 octa-core ပရိုဆက်ဆာကို အသုံးပြုထားပြီး၊ RAM 3GB နဲ့ ဖုန်းတွင်းဒေတာသိမ်းဆည်းနိုင်မှု 32 GB တို့ ပါရှိပါတယ်။ microSD ကတ်လည်း 128 GB အထိ ထပ်စိုက်သုံးနိုင်ပါတယ်။ P9 ဖုန်းကို RAM 3GB ဗားရှင်းအပြင်၊ RAM 4GB နဲ့ storage 64GB ပါတဲ့ မော်ဒယ်ဆိုပြီး မော်ဒယ်နှစ်မျိုး ၀ယ်ယူနိုင်မှာပါ။ P9 Plus ကတော့ RAM 4GB/64 GB မော်ဒယ်ပဲ ထွက်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဖုန်းဂရပ်ဖစ်ပိုင်းမှာ လက်ရှိအချိန်ထိ Huawei ဖုန်းတွေထဲမှာ အကောင်းဆုံးဂရပ်ဖစ်ကတ်ဖြစ်တဲ့ Mali-T880 MP4 GPU ကို သုံးထားပါတယ်။ Samsung Galaxy S7 ရဲ့ Mali-T880 MP12 ဂရပ်ဖစ်ကတ်ထက် မဆိုစလောက်လေး နိမ့်ပါတယ်။
Huawei P9 ရဲ့ အထူးခြားဆုံးအချက်ကတော့ နာမည်ကျော်ဂျာမန်ကင်မရာကုမ္ပဏီ Leica ရဲ့ SUMMARIT lens တွေ အသုံးပြုထားတဲ့ 12 MP ကျောကင်မရာနှစ်လုံးတွဲ ပါရှိလာတာဖြစ်ပြီး၊ ဖုန်းတွေရဲ့ ကင်မရာလောကကို ပြောင်းလဲပစ်မယ့်ဖုန်းလို့ Huawei က ကြွေးကြော်ထားပါတယ်။ ဒီကင်မရာဆန်ဆာနှစ်လုံးတွဲမှာ တစ်လုံးက monochrome ဆန်ဆာနဲ့ နောက်တစ်လုံးက ကာလာဆန်ဆာဖြစ်ပြီး၊ monochrome ဆန်ဆာက အလင်းရောင်ဖမ်းယူနိုင်မှု ၃၀၀ ရာခိုင်နှုန်း ပိုကောင်းပါတယ်။ ရှေ့ကင်မရာကတော့ 8-megapxiel ပါ။ ဒီ့အပြင် ကင်မရာအတွက် သီးသန့် depth ဆန်ဆာပရိုဆက်ဆာတစ်ခုကိုလည်း သုံးထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ ကင်မရာဆန်ဆာနှစ်လုံးပါဝင်တာကြောင့် ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးမှ focus ပြန်ချိန်တာမျိုးပါ လုပ်နိုင်ပါတယ်။
manual camera mode မှာလည်း ISO ၊ exposure ၊ shutter speed တွေကို ပို ထိန်းလာနိုင်လာနိုင်သလို၊ RAW format နဲ့လည်း ရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေကို သိမ်းဆည်းနိုင်တာကြောင့် ဓာတ်ပုံဝါသနာရှင်တွေအတွက် အကြိုက်တွေ့မယ့်စမတ်ဖုန်းဖြစ်ပါတယ်။
အရောင်ခြောက်မျိုးနဲ့ ရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်မယ့် Huawei P9 နဲ့ P9 Plus စမတ်ဖုန်းတွေရဲံ ဈေးနှုန်းကတော့ P9 RAM 3GB မော်ဒယ်က မြန်မာငွေ ရှစ်သိန်းခန့်၊ RAM 4GB နဲ့ storage 64GB မော်ဒယ်က ၈ သိန်း ၈ သောင်းခန့်ရှိပြီး၊ မျက်နှာပြင်ပိုကြီးတဲ့ P9 Plus ကတော့ ဆယ်သိန်းခန့် ရှိပါတယ်။ အာရှဘက်ထုတ် P9 ဖုန်းတွေပဲ dual-SIM နဲ့ ဖြစ်ကာ၊ ဧပြီလ ၁၆ ရက်နေ့ကစတင်ပြီး၊ နိုင်ငံပေါင်း ၂၉ နိုင်ငံမှာ ၀ယ်ယူနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံဈေးကွက်ထဲ ဘယ်အချိန်ဝင်မလဲဆိုတာကိုတော့ မသိရသေးပါဘူး။
Ref: Android Authority
<<< အောက်မှာ Click တစ်ချက်လောက်နှိပ်ပေးခြင်းအားဖြင့် တစ်ဖက်တစ်လမ်းကကူညီရာရောက်ပါတယ်။ >>>
▼ April ( 348 )
♪ သင်ဘယ်နေရာသွားသွား Selfies ဓါတ်ပုံတွေရိုက်ပေးမ...
မိကျောင်း Games [47.8 MB] [apk]
♪ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းစမတ်ဖုန်းငါးမျိုးမှာ Xi...
♪ မျက်နှာပြင်ကို အဆုံးစွန်ထိကွေးလို့ရတဲ့ စမတ်ဖုန်း...
နောက်ဆုံး ဗါးရှင်းဖြစ်တဲ့ - Facebook v76.0.0.0.27 ...
Super Piano HD Full v6.4 apk
RAR 5.40.build40 (40) APK Latest Version Download
Viber for Windows 6.0.1 - Myanmar Font
Internet Broser တွေထဲမှာ အားလုံးထက် 100% လောက်မြန်...
♪ ကွန်ပြူတာမှာ Hard Disk နေရာလွတ်အများကြီးရလာအောင်...
ကလေးများအတွက် အင်္ဂလိပ်စာလုံးဆက် ဥာဏ်စမ်း [14.7 MB] ...
♪ ခေတ်သစ်မျိုးပွားနည်း ♫
♪ အူရီဒူးမှမိတ်ဆက်လိုက်သည့် Facebook စိတ်ကြိုက်သုံ...
Ubuntu ကို Memory Sticks ပေါ်မှာတင်နည်း
Windows 10 Pro Update April 2016 Full Key [ 32 bit...
Sony Vegas Pro 13 Full Patch (386.7MB)
Windows 10 All in One ISO 32 Bit 64 Full (4.8GB)
Windows7SP1 Update 2016 x86-x64 16in1 Full Acti...
♪ “Lenovo ZUK Z2 Pro ကိုမိတ်ဆက်” ♫
♪ ဦးကျော်ဟိန်းရဲ့ နာမည်ကြီးပြီးလူကြိုက်များခဲ့သော...
♪ ဈေးနှုန်းချိုသာတဲ့ - “AOTO X5” ♫
♪ “HTC က စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် HTC 10 စမတ်ဖုန်းကိုမိတ...
♪ ၂၀၀၃ခုနှစ်မှ ယခုအထိ Apple ၏အမြတ်ဝင်ငွေ ပထမဆုံးအြ...
♪ နောက်ထွက်မည့် iPhone7တွင် ရေစိမ်ခံနိုင်စွမ်း၊ ...
Elemental rush [99.6 MB] [apk]
♪ RAM 8GB အထိ ပါဝင်လာဖွယ်ရှိတဲ့ Microsoft ရဲ့ Wind...
♪ ဈေးနှုန်းခြောက်သိန်းခွဲခန့်ရှိတဲ့ ၅ လက်မအရွယ် H...
♪ ES File Explorer သုံးပြီး ကွန်ပြူတာထဲကဖိုင်တွေကိ...
လမ်းသရဲလူမိုက်များ စစ်ပွဲ [287.1 MB] + SD Data
မိမိဖုန်းထဲ အကြောင်းအရာတွေကို ကြည့်မရအောင်လုပ်ပေးမ...
ကွန်ပျူ တာကို သွက်လက်မြန်ဆန်စေမယ့် - CCleaner Prof...
Internet Download Manager 6.25 Build 16 Full Versi...
♪ iPhone အားနည်းချက်နှင့်ပတ်သက်၍ Apple ကို FBI သတိ...
♪ Samsung က ဟန်းဆက်နှင့် Tablet များကို အွန်လိုင်း...
♪ “မြန်မာဘာသာဖြင့်ပါ အသုံးပြုနိုင်မည့် Samsung အွန...
♪ မြန်မာငွေတစ်သိန်းခန့်သာရှိတဲ့ ၅လက်မအရွယ် HD မျက်...
အသစ်ထွက် အမိုက်စား ရုပ်မလှပေ့မယ့် လှပသွားအောင် ရို...
ဓါတ်ပုံတွေကို Professional ကျကျ Editing ပြုလုပ်နို...
Effects များစွာနှင့် ဗီဒီယို ကာရာအိုကေစာတန်းထိုးနှ...
ကွန်ပျူတာကဲ့သို့ File တွေကိုအသုံးပြုနိုင်တဲ့ ES F...
ဓာတ်ပုံနှင့် ဗီဒီယိုတွေကို အလှပဆုံးနှင့် ကြည့်ကြည်...
Hotspot Shield Vpn Elite Edition 5.20.21 Full Vers...
ဓာတ်ပုံတွေနှင့် Taxt စတိုင်တွေကို အကောင်ဆုံး ဖန်...
အင်တာနက်ကို 5G အထိ အသုံးပြုနိုင်မယ့် Internet Brow...
ပန်းချီ ဝါသနာရှင်တွေအတွက် အလွယ်ဆုံး ပန်းချီ ရေးဆ...
Root မလိုပဲ မြန်မာစာ အမှန်ပေါ်စေမယ့် iFont.Donate....
♪ Android အက်ပလီကေးရှင်းများကို Chrome OS မှာ အသုံ...
ဖုန်းတွေမှာ Browser နှင့် ဆော့လို့ ကြော်ငြာခဏခဏ ဝင...
iPhone SE ( သို့) မြန်မာငွေငါးသိန်းခန့်နဲ့ ရနိုင်ေ...
မြင်းပြိုင် 3D [49.6 MB] [apk]
♪ Snapchat ကိုယှဉ်ပြိုင်မယ့် Camera App တစ်ခုကို F...
♪ လက်မတစ်ချောင်းတည်းနဲ့ စာမြန်မြန်ရိုက်နိုင်မယ့် M...
♪ အွန်လိုင်းမှာ Game Of Thrones Season6အတွက် Spo...
တောကြမ်းကားမောင်း 3D [33.1 MB] [apk]
♪ Myamar Font Changer apk တွေကို တစ်နေရာထဲမှာ ရနို...
♪ Mobile Guide Issue Vol-3 ၊ Issue-050 (25.4.16) ♫...
♪ Google Drive ကနေ 10TB Free ရယူနည်း Video ♫
♪ ဈေးနှုန်း သက်သာတဲ့ Android စမတ်ဖုန်းကို မကြာမီ...
♪ ဖုန်းဘက်ထရီ သက်တမ်းရှည်စေသော် ♫
♪ “Vivo X5 Pro” ♫
လူတွေ ဘာကြောင့် ဒေါသထွက်ရင် အော်ပြောသလဲ?
♪ သင့် အိမ်ထောင်ဖက် ဖောက်ပြန်နေရင် အသိပေးမယ့် မွေ့...
ဥာဏ်စမ်းရေပိုက်ဆက် ဂိမ်း [25.8 MB] [apk]
♪ ဒီဇိုင်းအသစ်နဲ့ MIUI 8 ကို မေလ ၁၀ ရက်နေ့မှာ မိတ်...
School of Dragons APK (40.6 MB)
♪ MPT က USSD Menu ကို မိတ်ဆက် ♫
♪ Xiaomi Mi Max ကို မေလ ၁၀ ရက်တွင် တရားဝင်မိတ်ဆက်မ...
♪ ကွန်ပျူတာပေါ်မှ Online Video များ ကြည့်မရခြင်း၊Do...
♪ ဗီဒီယို တိုက်ရိုက် ရိုက်ကူးထုတ်လွှင့်မှု ပြုလုပ်နိ...
♪ Windows ၏ AppLocker feature တွင် လုံခြုံရေး အားန...
♪ OPPO F1 Plus စမတ်ဖုန်းသစ်ကို ပြည်တွင်းဈေးကွက်သိ...
360 Total Security 8.2.0.1134​ Final Offline Insta...
iExplorer 3.9.4.0 with Serial keys
Google Play Games v3.7.20 for Android
AMC Security 5.4.1 (50401) Latest APK Download
Easy Uninstaller 3.0.5 (95) APK Latest Version Dow...
Google Play Services 8.7.03 (2645110-030) Latest V...
Google Play Store 6.4.13.C-all  2754070 APK Lat...
♪ သင့်ဖုန်းမှာ Facebook Messenger အကောင့်များစွာကိ...
Xiaomi Mi5ကို ဘာကြောင့်ဝယ်သုံးသင့်လဲ?
♪ Apple ရဲ့ ဝန်ဆောင်မှုနှစ်မျိုးကို ဖျက်သိမ်းခဲ့တဲ့...
♪ ဂျာနယ်လစ်တွေအတွက် ရည်ရွယ်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Philips ...
♪ HTC 10 နဲ့ Samsung Galaxy S7 ကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ြ...
♪ Leica ကင်မရာနှစ်လုံးတွဲမပါဘဲ၊ ဈေးပိုသက်သာသွားတဲ...
♪ Samsung ဖုန်းတွေမှာ password ဒါမှမဟုတ် pattern l...
ရုရှား ကားမောင်းသမား Game [96.1 MB] [apk]
Sony ၏ နားရွက်မှာတပ်စရာမလိုသော အနာဂတ် headphone အသ...
♪ လူမှုရေး မီဒီယာများတွင် သတိပြုရမည့် ထိပ်တန်းလိမ်လ...
တင့်ကားစစ်တိုက် Lords of the tanks: Battle tanks 3...
Ernie vs evil Game [29.3 MB] [apk]
ဒီနေ့ထွက် - Facebook Messenger v68.0.0.18.67 APK ...
♪ SPU နှင့် 6GB RAM တပ်ဆင်ထားသော ZUK Z2 Pro မိတ်ဆက...
♪ 6GB RAM နှင့် Snapdragon 820 ပါဝင်သော Le Max2က...
♪ ဆိုက်ကြီးလွန်းနေတဲ့ Video ဖိုင်တွေကို Window နဲ့...
အင်းးးးးးး ဘာHandset ၀ယ်ရင်ကောင်းမလဲနော်...